Wyne Su Khine Thein @ Monsoon Hip Hop Show 2012 | Myanmar Singer and Vocalist Photos
Wyne Su Khine Thein @ Monsoon Hip Hop Show 2012
Here are photos of Myanmar Popular Signer Wyne Su Khine Thein at Monsoon Hip Hop Show, which was held on July 8, 2012 at Myaw Sin Gyun, Kan Daw Gyi Park, in Yangon. Myanmar popular Hip Hop Singers; Sai Sai Kham Hlaing, So Tay, Jock Jack, Kyaw Htut Swe, Bobby Soxer, Hlwan Paing, Bunny Phyo and many more new face hip hop singers performed for this Hip Hop Show together with Wyne Su. This concert is sponsored by Ma Ma Instant Noodle. Hundreds of Hip Hop Fans showed up at the concert neglecting the rain. ဇူလိုင်လ (၈) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ ကန်တော်ကြီး မျော်စင်ကျွန်းမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Hip Hop Show မှာ ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ ၀ိုင်းစု ရဲ့ ဖက်ရှင်
Wyne Su Khine Thein @ Hip Hop Show 2012
theinzaw koJuly 10, 2012 at 7:10 AMGhost.ReplyDeleteReplies.August 5, 2012 at 10:45 PMagreedDeleteLan SanOctober 11, 2012 at 4:43 AMNin tot htet tot po chaw mar per thu ka.ah yu twaeDeleteReplyCrazyCATJuly 10, 2012 at 2:32 PMhee heeReplyDeleteUnknownJuly 11, 2012 at 4:55 AMI don't know about her singing, but she is ugly.ReplyDeleteRepliesLan SanOctober 11, 2012 at 4:46 AMBut...she is cute ....more than you..DeleteReplyအလွမ်းJuly 13, 2012 at 4:53 AMမိုက်တော့ မိုက်ပါတယ်ReplyDeleteBa LaJuly 13, 2012 at 9:19 AMShe isavery popular girl.ReplyDeletenyo moe therJuly 13, 2012 at 8:19 PM၀ိုင်းစု sexy အ၀တ်နဲ့မလိုက်ဘူး။တည်ငြိမ်တဲ့အ၀တ်တွေဝတ်ရင်ပိုလှပါလိမ့်မယ်။၀ိုင်းစုရဲ့ပရိတ်သတ်။ReplyDeleteKo PhyoJuly 15, 2012 at 10:19 AMဟော့လွန်းတယ်။ReplyDeletela woonJuly 15, 2012 at 11:07 PMသူက တိုလေကြိုက်လေဖော်ချင်နေတာလေအနောက်ကအဆိုတော်တွေအားကျပြီးဒါကြောင် သူအချစ်ဟောင်းရဲ့ အဖေကသဘောမကျတာနေမှာReplyDeletenevertryJuly 16, 2012 at 5:50 AMi dont likeReplyDeleteFishJuly 17, 2012 at 9:49 PMအရမ်းကြပ်လွန်းတယ်...အဆီတွေတစ်နေတာပဲReplyDeleteko ooAugust 3, 2012 at 5:38 AMခိုးစာတာများနေတော့ အဆီတွေ စုနေတာလေReplyDeleteachitlay sumonAugust 5, 2012 at 8:52 AMနင့်ကသူများပြောစရာမလုပ်နဲလေ။အနူပညာရှင်ဖြစ်ပြီအရှက်တရား အ ကြောက်တရားရှီလား။ReplyDeleteRepliesLan SanOctober 11, 2012 at 4:48 AMသူတစ်ယောက်တည်းမှမဟုတ်တာ...အားလုံးလိုလိုအဲ့လိုချဉ်းပဲ..သူတစ်ယောက်တည်းမှမဟုတ်တာ....မကြိုက်ရင်လည်းနေပေါ့....DeleteReplyloveis dangerAugust 6, 2012 at 12:34 AM၀ိုင်းစုပြောတဲ့စကားရဲ့အကြောင်းအရာကိုမသိပဲပုပ်ခတ်ချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့စာသားကိုအပြည့်အစုံမတင်ပဲပရိသတ်နဲ့အထင်လွဲအောင်လုပ်တာ....အဲဒီဂျာနယ်မှာသေချာပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ...သူပြောတာကပရိသတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး...အင်တာနက်ကမကောင်းပြောတဲ့သူအနည်းစုကိုပြောတာပါ...အနုပညာရှင်တွေကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတယ်မပြောဘူး.အပြစ်လေးနည်းနည်းလုပ်မိတာနဲ့ပြောချင်နေကြတယ်.....အခုလိုအတိုတွေဝတ်တာကိုပြောတဲ့သူတွေအချိန်အားရင်5မိနစ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်....ဒီဘက်တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကိုခဏလိုက်ခဲ့ပါ...အဲရှေးခေတ်မှာနေမနေနဲ့...ReplyDeleteRepliesachitlay sumonAugust 10, 2012 at 2:11 AMဝိုင်းစုရဲရှေနေလား နောက်နေလား ဝတ်စားတာမတက်လို့ပြောတာ။DeletemyanmarSeptember 6, 2012 at 4:05 AMlove is danger ဆိုတဲ့ တိရစ္ဆာန်။ မင်း ဝိုင်းစု အိမ်က အလုပ်သမား။ မင်းငါ့အိမ်က ခွေးလီး ကို လာစုပ် လိုက်။ခွေးက မင်းထက်မြင့်တယ်နော်။ worthweller ကွ ဟားဟား DeleteLan SanOctober 11, 2012 at 4:50 AMနင့်ညီမမင်းသမီးဖြစ်မှနိုင်အောင်ထိန်းဟ....ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း...နင်မင်းသမိးလုပ်ကြည့်..ဂေါက်သီးရဲ့.DeleteReplybluemanAugust 6, 2012 at 1:07 AMhay -- အခုအင်တာနက်မှာ ၀ိုင်းစုအကြောင်းပြောနေကြတာ ဟုတ်လားဗျာ -- မယုံလို့ပါဗျာ -- ပြည်ပြည့်စုံစုံသိချင်ပါတယ်။ReplyDeletebluemanAugust 6, 2012 at 1:15 AMအခု ၀ိုင်းစု ဘယ်ရောက်နေလဲ -- သိရင်ပြောပါအုံးဗျာ --ReplyDeleteloveis dangerAugust 6, 2012 at 1:41 AM၀ိုင်းစုသူ့အိမ်မှာသူရှိမှာပေါ့...ဘာတွေမဟုတ်တာတွေပြောချင်သေးကြလို့လည်း...ဘာလို့လည်းမသိဘူးနော်...သြ..၀ိုင်းစုကအပြစ်မမြင်ဆိုတော့လည်းတစ်ပုဒ်တည်းနဲ့အောင်မြင်မက်လောက်စရာအခွေလုပ်တော့လည်းအ၇မ်းအောင်မြင်မျက်လှည့်အခွေထပ်ထွက်တော့လည်းအောင်မြင်အခုဆယ့်နှစ်ကြိုးကဝေထွက်တော့လည်းအောင်မြင်တော့မနာလိုလို့တိုက်ခိုက်ကြတာလားမသိဘူးနော်...ReplyDeleteRepliesLan SanOctober 11, 2012 at 4:52 AMဟုတ်တယ်....သူအရမ်းသနားဖို့ကောင်းတာတွေရှိတယ်။သူတို့ကတကယ့်ဘဝအစစ်ကိုမသိပဲပြောနေကြတာ......တကယ်မသိပဲနဲ့မမြင်ဘဲ...မတွေ့ဘဲ....လျောက်ပြောနေကြတယ်။ကိုယ်ချင်းမစာတာ။DeleteReplyA SiNovember 12, 2012 at 7:25 AMI lovt it sis wyne su khine don't care about sexy or whatever don't care about it na sis <3ReplyDeleteWan naJuly 31, 2013 at 12:26 AMဘာကို ကိုယ်ချင်းစာရမှာလည်း ညအချိန်မတော် 101 ktvမှာ ဘဲနဲ့ လာသောင်းကျန်းနေတာကို ငါတွေ့ခဲ့တယ်ကွ 2:30 မှ ဘယ်ပြန်သွားလဲတော့ မသိဘူး ReplyDeleteAdd commentLoad more...